Japana: ravan’ny antontan’isa farany ny anganon’ny fandrosoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2009 20:24 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Deutsch, Español, 繁體中文, 简体中文, Français, বাংলা, Italiano, bahasa Indonesia, English
Japoney iray amin'ny enina no miaina ao anatin'ny fahantrana araka ny tatitra [teny anglisy] navoakan'ny minisiteran'ny raharaha sosialy. Araka ny antontan'isa navoakan'ny OCDE [en], dia manana ny iray amin'ny tahan'ny fahantrana ambony indrindra amin'ny tany mandroso i Japana ka fahaefatra aorian'i Meksika, Torkia ary i Etazonia.
Efa navoitran'ny sekretera jeneralin'ny sampan-draharahan'ny ady amin'ny fahantrana (反貧困 Han Hinkon) [ja] Makoto Yuasa ny olana mikasika ity fahantrana ity tamin'izao fomba fitenenana manaraka izao[en]:
Ysaki nanoso-kevitra fa efa nisy hatramin'ny ela ity olana ity saingy maro ny Japoney no nieritreritra azy ho olan'ny hafa.
Miyabi-tale mihevitra fa manana tantara lava ity lohahevitra ity ary tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny tsy fihontsonan'ny politika.
Ukkii ohatra manantena fa hamerina any amin'ny fahatanjahan'ny fanahy nampalaza ny mponina Japoney indray izao fotoana maizina andalovana eo amin'ny tantaran'i Japana eo amin'ny lafiny sosialy sy toe-karena izao.
Fahasalamàna 17 Mey 2022
Media sy Fanoratan-gazety 28 Avrily 2022